Jacaylka Rabbi WQ.Sh. Cabdirisaaq Cabdiraxmaan Xasan Rakuub | Wajaale.com
Hargeisa(WNN):-Waa ay sahlan tahay in qofku si fudud u yidhaa, “Waa aan jecelahay Rabbigay.” Se aanu ka dhabayn jacaylkaa hab-dhaqankiisa. Laga yaaba in aanu garanayn jacaylka laga raba waxa uu yahay. Erayga ‘jacayl’ waa eray loo adeegsado waxyaalo kala geddisan oo ku yimaadda dareenno kala duwan oo siyaalo kala jaad ah uu qofku ula kulmo ama u dareemo. Halkaa erayna loo wada adeegsado. Sida aynu carrabaawnay adeegsiga eraygaa ayaa kulmiya dareenno kala jaad ah oo halkaa eray un wada ah. Tusaale ahaan; dareenka ilmuhu waalidkii ku qaabilo ee naxariiseed ayaa la odhan karaa waa jacayl uu cid walba ka jecel yahay waalidkii, rabbaynta iyo ilaalintaa darteed. Waalidku ilmihiisu in uu yahay cad laga beeray darteed ayaa keenta in ay u qaadan jacayl waalidnimo. In ay koritaankiisa ka hormariyaan baahiyahooga gaar ahaneed. Dareenada keena in qofku wax jeclaado waxa ka mid ah soo jiidasho uu qof kale si niyad ah u doono in loogu yeedho jacayl. Sidoo kale jacaylka lammaaaha nolosha wadaaga oo ah ka dhabta. Qofku saaxiibkiisa gaarka ah ee uu dadka ama asxaabtiisa ka xigtaysto oo uu talo iyo hogo tusaalaynba ka helo waxa ka dhexeeya jacayl saaxiibtinimo. Haddaynu intaa kaga nimaadno qeexista erayga ‘jacayl’, waxa hubaal ah qofka aad leedahay, “waa aan jecelahay.” In mar walba aad ku dadaashid raali gelintiisa iyo in aanad marna tusin wax uu kohdo oo u dhibsado. Taas oo keeni karta cadho xaggiisa kaaga timaadda ama xidhidhkiina wax yeesha. Qofkaasi ha ahaado; waalidkaa, ubadkaaga, lammanahaaga nolosha kula wadaaga ama saaxiibkaaga dadka kugu dhow’e jacaylkaa idinka dhexeya waxa uu ku jaan go’an yahay inta xadhigaa idin xidhiidhshaa idin dhexeeyo.